Madaxweyne Deni oo sheegay in khilaafka doorashooyinka xal laga gaarayo | XAL DOON
Home NEWS Madaxweyne Deni oo sheegay in khilaafka doorashooyinka xal laga gaarayo
Madaxweyne Deni oo sheegay in khilaafka doorashooyinka xal laga gaarayo
Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni ayaa qiray in siyaasadda Somaliya ay tahay mid aad u dhib badan, qofka ka shaqaynayana ay ku adag tahay.
Madaxweynaha oo wareysi dhinacyo badan taabanaya siiyay Universaltv ayaa kaga hadlay xaaladda guud ee dalka, midda siyaasadda iyo caqabadaha horgudban hannaanka geedi-socodka ee doorashooyinka dalka.
“Runtii siyaasadda Somaliya aad bay u adag tahay, waxaana keenaaya waa shaqo aanan nidaam ku socon, oo aad ka shaqaynaysid. Marka waan qirayaa inay siyaasadda Somaliya adag tahay, qof kasta oo ka shaqaynayana ay ku adag tahay, maxaa yeelay adduunka kale siyaasaddu ama dowladnimada adduunka casriga la yaqaano waa hay’ado dowladeed oo dastuur leh.” Ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri “Dalka Somaliya burbur waxaa uga dhacay dastuurkii dowladda, dadkii waa jooggaa, dhulkiina waa jooggaa, laakiin shuruucdii iyo nidaamkii dowladnimadu mudduu maqnaa, oo dadka qaybtiisa iska iloobay, weliba jiil aad u fara-badan oo jiilalka hadda ah, oo aniga intooda badan iga yar-yar oo hadda aad u soo koraaya, oo runtii daruuf adag ku soo barbaaray, aqoon-darro badan baana jirta. Dadkii dowladnimada yaqaanay oo ka shaqayn jirayna wax dhintay iyo wax gaboobee noqdeen.”
Siciid Cabdullaahi Deni, Madaxweynaha Puntland ayaa iftiimiyay inay soo dhammaanayaan khilaafaadyada wiiqay doorashada lagu wado in sanadkan dalka laga qabto.
“Aniga iyo dad badan oo Soomaaliyeed intaas waa laga wadahadlayaa, hadda shirkii ugu dambeeyay guddiga farsamada ee Baydhabo lagu qabtay ujeedooyin fiican oo badan bay ka soo jeediyeen, oo aan maleynayo inay hadda wax isu soo dhawayn karaan. Waxa hadda taagan waa khilaafka Gedo, waxaadna mooddaa in si uun loo maarayn karo, haddii wax dambe soo dhici doonin, laakiin hadda Khilaafaadyadii u dambeeyay ee taagnaa runtii waxaad moodeysay in laga gudbayay.” Ayuu yiri Madaxweynuhu.
Dhanka kale Madaxweynaha Puntland oo la weydiiyay waxa ay jawaabtiisa tahay in mar walba Puntland lagu eedeeyo in ay la safan tahay Midowga Musharaxiinta ayaa sheegay inaanay sax ahayn in Puntland taageerto mucaaradka, balse ay mucaaradku yihiin muwaadiniin, qaarkood-na horey xilalka dalka uga soo qabtay, isla-markaana ay Puntland war ka soo saartay weerarkii 19-kii bishii February loogu gaystay Magaalada Muqdisho.
Hadalka Madaxweyne Deni ayaa imaanaya, iyadoo Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu xalay iclaamiyay shir 4-ta bishan ka dhacaya Caasimadda Muqdisho, oo lagu dhameystirayo wadahadalladii la xiriiray hirgelinta doorashooyinka dalka ee u dhexeeyay Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Maamulka Gobolka Banaadir.
Xil. Mahad Salaad oo sheegay in uu Farmaajo weerar ku yahay Saadaq John
#DegDeg: Saadaq Joon oo wata Booliis iyo Millatari ayaa caawa u guuray xaafadda Shiirkole.
Beesha Caalamka ayaa wadajir uga horyimid qaraarkii Muddo kordhinta Madaxweyne Farmaajo
Cali Guudlaawe oo heysata Labo daran mid dooro!
Degdeg: Ergo uu soo diray Farmaajo oo kulan la leh xubno ka tirsan Beesh Caalamka.
Qarax Gaari ku qabsaday duleedka degmada Balcad
© Copyright Xaldoon Media - All rights reserved 2020